အသံစုပ်ယူနိုင်သော panel များ၏ အားသာချက်ဆယ်ခု။ သတင်း- Suzhou Soundbetter Architectural Materials Co., Ltd.
အသံစုပ်ယူနိုင်သော panel များ၏ အားသာချက်ဆယ်ခု။
1. ပတ်ဝန်ကျင်ကာကွယ်မှု- ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဓါတ်မတည့်သော၊ ဘက်တီးရီးယားများ၊ ဖော်မယ်လ်ဒီဟိုက်၊ အမိုးနီးယား၊ benzene နှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော အရာများကို ထုတ်လုပ်ပေးပြီး အမျိုးသားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ အလှဆင်ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် အဆိပ်အတောက်ကင်းပြီး အနံ့အသက်ကင်းသည်။ ၎င်းကိုချက်ချင်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက် စစ်မှန်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2. တည်ငြိမ်မှု- ထုတ်ကုန်သည် အိုမင်းရင့်ရော်မှု၊ ရေစိုခံ၊ အစိုဓာတ်ခံ၊ မှိုဒဏ်ခံ၊ တိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားဒဏ်ခံ၊ ပိုးမွှားဒဏ်ခံ၊ ထိရောက်သော မီးမလောင်အောင်၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ သက်တမ်းရင့်မှု၊ အပူထိန်းသိမ်းမှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအတွက် ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ယိုယွင်းမှုမရှိ၊ သိမ်မွေ့မှုမရှိ၊ ပျက်ကွက်သောစွမ်းဆောင်ရည်မရှိပါ။
3. ဘေးကင်းရေး- ထုတ်ကုန်တွင် "ရေရှည်အသုံးပြုမှု" ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး မြင့်မားသောခွန်အားနှင့် ရေခံနိုင်ရည်၊ ပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကွဲအက်ခြင်းမရှိပါ။
4. နှစ်သိမ့်မှု- ထုတ်ကုန်အသံ လျှပ်ကာ၊ လျှပ်ကာ၊ ဆီဆန့်ကျင်၊ တည်ငြိမ်မှု။
5. စစ်မှန်မှု- ထုတ်ကုန်၏အသွင်အပြင်သည် သဘာဝ၊ လှပသော၊ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး ထူးခြားသော၊ သစ်သားဆန်သောသစ်သားနှင့် သဘာဝအသွင်အပြင်နှင့် သဘာဝအတိုင်း ရိုးရှင်းသောခံစားမှုတို့နှင့်အတူ သဘာဝအတိုင်း ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသောခံစားမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို အသေးစိပ်၊ အသွင်အပြင်နှင့် အရောင်အသွေးအသားစဥ်အသုံးပြုမှုအပေါ် အာရုံစိုက်ထားပြီး အရှေ့တိုင်းအာကာသတွင် လုပ်ဆောင်သည်။" စိတ်၏တက်ကြွမှုနှင့် တက်ကြွမှုအပြည့်ရှိသော ဝိညာဉ်ရေးရာပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပါ။ ထုတ်ကုန်များသည် ထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ထင်ဟပ်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။ ဒီဇိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ခေတ်မီဗိသုကာအလှအပနှင့် ပစ္စည်းဗေဒဆိုင်ရာများ။
6. အဆင်ပြေမှု- ထုတ်ကုန်များကို ဖြတ်၊ လွှ၊ အစီအစဥ် ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သံမှို၊ ဆေးခြယ်၊ ချည်နှောင်ထားနိုင်ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်မှုဒီဇိုင်းရှိသည်။ ၎င်းတို့အများစုကို ခြေစွပ်များ၊ လှံစွပ်များနှင့် ကျောရိုးချိတ်ဆက်မှုများဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ တပ်ဆင်ခြင်းသည် အချိန်နှင့် ဒုက္ခကို သက်သာစေပြီး အလွန်မြန်ဆန်သည်။ ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုနှင့်ရိုးရှင်းသောတည်ဆောက်မှု။
7. ထူးခြားမှု- ထုတ်ကုန်ကို အပူပေးပြီး ပေါင်းစပ်ဆေးထိုးပုံသွင်းပစ္စည်းများဖြင့် သစ်သားဖိုက်ဘာနှင့် polyester တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ benzene၊ formaldehyde၊ cyanide နှင့် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသော အရာများ ပါဝင်သော ပစ္စည်းများကို မသုံးပါ၊ အလှဆင်ခြင်း ညစ်ညမ်းမှုကို ရှောင်ရှားခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း မလိုအပ်ဘဲ ညစ်ညမ်းမှု ကင်းစင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်ပြီး အသံစုပ်ယူမှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှုဆိုင်ရာ လက္ခဏာများရှိသည်။
8. ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှု- ထုတ်ကုန်တွင် ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုရှိသည်။
9. ကွဲပြားမှု- ကြမ်းခင်းစီးရီးသည် သာမန်အခင်းများအတွက် သင့်လျော်ပြီး ကြမ်းပြင်အပူတင်ခြင်းအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သည်။
10. ကျယ်ပြန့်သည်- အခန်းများ၊ ဟိုတယ်များ၊ ဖျော်ဖြေရေးနေရာများ၊ ရေချိုးခန်းများ၊ ရုံးခန်းများ၊ မီးဖိုချောင်များ၊ အိမ်သာများ၊ ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ အားကစားကွင်းများ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများ အစရှိသည့် မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မဆို သင့်လျော်ပါသည်။
နောက်တစ်ခု:အသံစုပ်ယူနိုင်သော အကန့်ဖွဲ့စည်းပုံ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။